AbaThengisi beShushu boTshintshiselwano abaThengi beTshintshiselwano boTshintshiselwano boBushushu kunye nababoneleli
Ingqiqo Crossflow Plate Ubushushu sokufudumeza
Umgaqo wokuSebenza weSitrato esiChukumisayo esiHambisayo sokuTshintshisa ubushushu: Iifoyile ezimbini zommelwane zealuminium zenza umjelo womoya omtsha okanye wokukhupha umoya. Ubushushu buhanjiswa xa imijelo yomoya ihamba ngokunqamleza imijelo, kwaye umoya omtsha kunye nomoya wokukhupha wahlulwe ngokupheleleyo. Iimpawu: Ukubuyisela ubushushu obuchanekileyo Ukwahlulwa okupheleleyo komoya ococekileyo kunye nemisinga yomoya yokukhupha ubushushu ukuya kuthi ga kwi-80% yecala elisecaleni lokushicilela ukubumba umda ophindwe kabini Ukutywinwa ngokudibeneyo ngokupheleleyo. Ukuxhathisa umahluko woxinzelelo phezulu ...
Umnqamlezo Counterflow Plate Ubushushu kubananisi
Umgaqo wokusebenza weCross Counterflow oSebenzayo woMoya ukuya kwiPleyiti yoBushushu boMbane: Iifilili ezimbini zommelwane zealuminium zenza umjelo wokuhambisa umoya omtsha. Ubushushu buhanjiswa xa imijelo yomoya ingena ngokungagungqiyo kwaye inxenye yemilambo yomoya ihamba ngokuthe ngcembe ngamajelo, kwaye umoya omtsha kunye nomoya wokukhupha wahlulwe ngokupheleleyo. Iimpawu eziphambili: 1.Ukubuyiselwa kobushushu obufanelekileyo 2.Ukuhlukaniswa ngokupheleleyo kwemifudlana yomoya emitsha kunye nokukhupha umoya 3.Ukusebenza ngokufumana ubushushu ukuya kuthi ga kwi-90% ye-4.2-icala lokushicilela elicwangcisiweyo 5 ...
I-Crossflow Plate Fin Isitshisi esipheleleyo sobushushu
Umgaqo wokuSebenza weHoltop Crossflow Plate oGqibeleleyo wokuHanjiswa kobushushu (i-ER Iphepha lesiseko sokutshintshiselana nge-enthalpy) Amacwecwe acwecwe kunye neepleyiti ezifakwe inkcenkcesho zenza amajelo omjelo womoya omtsha okanye wokukhupha umoya. ifunyenwe. Ezona mpawu ziphambili 1. Yenziwe ngephepha le-ER, elibonakaliswa kukuqina okuphezulu kokufuma, ukuqina komoya olungileyo, ukumelana neenyembezi kunye nokuguga. 2. Ubume obucwangcisiweyo ...
Abaguquleli beRotary Heat
Iimpawu eziphambili zokufudumeza ubushushu ngokujikeleza: 1. Ukusebenza okuphezulu kokubuyisela ubushushu obunengqondo okanye obushushu 2. Inkqubo yokutywina ye-labyrinth ephindwe kabini iqinisekisa ukuvuza komoya okuncinci. 3. Imizamo yokuzicoca yandisa umjikelo wenkonzo, ukunciphisa iindleko zolondolozo. 4. Icandelo lokucoca kabini liyayinciphisa ingxoxo ephuma emoyeni yokukhupha ukuya kumjelo womoya wokuhambisa. 5. Ukuthwala i-life-time-lubricated bearing akufuneki kulondolozo phantsi kokusetyenziswa kwesiqhelo. 6. Izithethi zangaphakathi zisetyenziselwa ukudibanisa ii-rotor's laminations ukomeleza ivili. 7. ...
Uphawu oluphambili lweeMpahla eziHlahla ubushushu 1. Ukufaka ityhubhu yobumbano nge-hydrophilic aluminium fin, ukumelana nomoya ophantsi, ukujija amanzi kancinci, anti-umhlwa ongcono. 2. Isakhelo sesinyithi esenziwe ngesinyithi, ukuxhathisa kakuhle ukubola kunye nokuqina okuphezulu. 3. Icandelo lokugquma lobushushu lahlula umthombo wobushushu kunye nomthombo obandayo, emva koko ulwelo ngaphakathi kumbhobho alunabushushu ngaphandle. 4. Isakhiwo somoya esixubileyo esingaphakathi, ukuhanjiswa kokuhamba komoya okufanayo, okwenza ukutshintshiselana ngobushushu kube ngokwaneleyo 5. Ezahlukileyo wor ...
Isebenza njani ivili le-desiccant? Ivili elomileyo le-desiccant elomileyo lisebenza kumgaqo wobugqi, oluyintengiso okanye inkqubo yokufunxa apho iswekile isusa umphunga wamanzi ngqo emoyeni. Umoya omisiweyo uyadlula kwivili le-desiccant kwaye i-desiccant isusa umphunga wamanzi ngokuthe ngqo emoyeni kwaye uyibambe ngelixa ujikeleza. Njengoko i-desiccant egcwele ubumanzi idlula kwicandelo lokuphinda yenziwe, umphunga wamanzi ugqithiselwa kumjelo womoya oshushu, o ...